Vatengesi Ngwarira: Kutenga Pamhepo Maitiro Ari Kuwedzeredza | Martech Zone
Vatengesi Ngwarira: Kutenga Pamhepo Maitiro Ari Kuwedzera
Chipiri, Gunyana 23, 2014 Douglas Karr
Vanhu vazhinji vari kutamira kumaguta apo kutakura kwezuva rimwe chete haigone chete, asi yatove munzvimbo mumaguta mazhinji kuUnited States.
Dhijitari Yekutenga Tsananguro:
webrooming - kana mutengi achienda kuchitoro kunotenga mushure mekutsvaga chigadzirwa online.
showroom - kana mutengi achitenga online mushure mekutsvaga chigadzirwa muchitoro.
Iko kukura kwekuputika kwe mobile commerce kuri kuunza chitoro kune mutengi pane kutungamira mutengi kuchitoro. Izvo zvinoshandura chimiro chechitoro… hombe zvitoro hazvichadiwe, panzvimbo yemakamuri madiki ekuratidzira izvo zviri zvehukama neakadzika-kuratidza uye chigadzirwa rubatsiro. Ini handifanire kumira mumutsara nefoni kana kunetseka nezve chigadzirwa chiri kusipo.
Zvakare, zvinoshandura chimiro chebudiriro kune yega yega yekutengesa. Zvitoro zvepamhepo hazvingofaniri kukwikwidzana nezvitoro zviri padyo, vanofanirwa kukwikwidza neese shopu yepamhepo inogona kuve nemitengo mikuru, kutumira mahara, kuendesa nekukurumidza, marongero anotyisa ekudzoka kana basa rakakura revatengi. Izvi zvinoreva kudyara kukuru muhunyanzvi pane kuenderera nekudyara zvidhinha nedhaka.
Kutenga zvigadzirwa pamhepo chinhu chitsva chiri mudanho repasi rese rekutengesa uye ndiyo imwe nzira iyo chiteshi ichiri kuyedza kujairira. Vamwe vatengesi vakasarudza kuenda online kudzingisa ecommerce divi rebhizinesi nepo vamwe vatengesi vachiramba vakatendeka kune yechinyakare, yepanyama chitoro chitoro sarudzo. Ehezve, vamwe vatengesi vakapaza nzira mbiri dzinogona kutungamira mukukura kwakanaka.
Iyi infographic inotsvaga nzvimbo yese yekutengesa online uye inotarisa pakukura kwayo pasirese. Kutenga pamhepo inyaya hombe kune avo vatengesi vechinyakare vakasarudza kusaenda online sezvo vachibata nevatengi showrooming (kubhurawuza zvigadzirwa zvavo) asi kwete chaizvo kutenga kusvikira vaenda online.
Iyi infographic kubva SnapParcel inodzidzawo zvingangoitika zvemberi maitiro mukutengesa kwepamhepo pasirese.
SnapParcel inopa kuendesa masevhisi kubva kuIreland kuenda kuCanada, USA neAustralia.
Tags: ecommercekutakurirwa maharaonline shoppingnhamba dzekutenga pamhepostats ekutenga pamhepochitorokuendesa zuva rimwe cheteshowroomingsnapparcelwebrooming
Ko Kambani Yako Nyaya Ine Izvi Zvishanu Zvakakosha?
Kana Iwe uri Mukutengesa kana Kushambadzira, Tora Zororo Izvozvi!
Mar 13, 2015 pa 3: 24 AM
Ndatenda nekugovana ruzivo rwunofadza nezve Retailers Chenjera: Online Shopping Trends Ari Kuwedzera. Iri ruzivo runobatsira kwazvo kune online blog wongororo vaverengi. Ramba wakadaro uchitumira seizvi.